Sayensị Na-etinye Aka, Ngosipụta Ahịa A Na-echefu echefu na Nke Na-agwụ Ike | Martech Zone
Ndị na-ere ahịa maara karịa onye ọ bụla mkpa ọ dị inwe ezigbo nkwukọrịta. N’agba ahia obula, ebum n’uche bu inye ndi na ege gi nti ozi nke ga etinye ha aka, tinye ha n’obi ha ma mee ka ha mee ihe-otu a ka okwesiri igwa obula. Ma iru ulo maka ahia gi otu, na-arịọ maka mmefu ego si agadi management, ma ọ bụ na-emepe emepe a ika-ewu ewu isi maka a isi ogbako, mkpa ka ị na-ekere òkè, kwesịrị ncheta, na kwenye.
Na arụ ọrụ anyị kwa ụbọchị na Kwado, mụ na ndị otu m emeela ọtụtụ nyocha maka etu esi ewepụta ozi n'ụzọ dị ike ma dị irè. Anyị agụwo ọrụ nke ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ na ndị ọkà mmụta banyere akwara iji nwaa ịghọta otú ụbụrụ mmadụ si arụ ọrụ. Dịka o siri pụta, anyị siri ike ịzaghachi ụfọdụ ọdịnaya, ma enwere ihe ole na ole dị mfe ndị na-eweta nwere ike ime iji mee nke a. Nke a bụ ihe sayensị nwere ikwu banyere imeziwanye ihe ngosi gị:
Kwụsị iji isi ihe - ha anaghị eme ka ụzọ atụ gị si arụ ọrụ rụọ ọrụ.
Onye ọ bụla maara ihe nkiri ọdịnala: isi okwu na-esote ndepụta nke isi ihe. Sayensị egosila na usoro a, enweghị nnukwu ọrụ, ọkachasị ma e jiri ya tụnyere ụzọ ọhụụ. Ndị nyocha nọ na Nielsen Norman Group emeela ọtụtụ nyocha nyocha iji ghọta etu ndị mmadụ si eri ọdịnaya. Otu n'ime ha isi nchoputa bụ na ndị mmadụ na-agụ web peeji “n'ụdị F.” Nke ahụ bụ, ha na-elebara ọdịnaya dị na elu nke ibe ahụ anya nke ọma ma gụọ obere na akara nke ọ bụla na-esote ka ha na-agbada na ibe ahụ. Ọ bụrụ na anyị etinye usoro okpomoku a na usoro slide ọdịnala — isi okwu na-esote ndepụta nke ihe ọmụma - ọ dị mfe ịhụ na ọtụtụ ọdịnaya agaghị agụ.
Kedu ihe ka njọ, ebe ndị na-ege gị ntị na-agba mbọ inyocha ihe ngosi gị, ha agaghị ege ntị n'ihe ị ga-ekwu, n'ihi na ndị mmadụ enweghị ike ịme ihe abụọ n'otu oge. Dabere na onye nyocha ihe banyere MIT Earl Miller, otu n'ime ndị ọkachamara n'ụwa n'ihe banyere iche echiche, “ịba ụba” agaghị ekwe omume. Mgbe anyị chere na anyị n’eme ọtụtụ ọrụ n’otu oge, anyị n’echegharị, n’echebe, n’etiti nke ọ bụla n’ime ọrụ ndị a nke na - eme ka anyị jọọ njọ n’ihe niile anyị na - achọ ime. N'ihi ya, ọ bụrụ na ndị na-ege gị ntị na-anwa ịgụ ihe mgbe ha na-egekwa gị ntị, ha nwere ike ịhapụ ịhapụ ozi dị mkpa nke ozi gị.
Yabụ oge ọzọ ị ga - eme ihe ngosi, kpochapụ isi okwu. Kama nke ahụ, rapara na visuals karịa ederede ebe ọ bụla enwere ike, ma belata oke ozi na slide ọ bụla na ego dị mfe nhazi.
Jiri ihe atụ mee ka atụmanya gị ghara ịhazi ozi gị naanị - kama nweta ya
Onye ọ bụla hụrụ akụkọ ọma nke na-eweta nlegharị anya, na-atọ ụtọ, na-esi isi, ma na-emetụ ndụ aka-ọ ga-abụ na e nwere ihe sayensị kpatara nke a. Ọtụtụ ọmụmụ achọpụtala na okwu nkọwa na nkebi ahịrịokwu - ihe dịka “senti” na “o nwere olu ọ nụrụ” - na-egbochi cortex mmetụ dị na ụbụrụ anyị, nke bụ ọrụ dịịrị anyị ịghọta ihe dịka ụtọ, isi, aka na anya. Nke ahụ bụ, etu ụbụrụ anyị si arụ ọrụ ịgụ na ịnụ banyere ahụmịhe nke uche na ụzọ o si arụ ọrụ na-enwe ha. Mgbe ị na-akọ akụkọ ejiri onyonye nkọwa kọwaa, ị bụ n'ụzọ nkịtị, na-eme ka ozi gị dịrị n'echiche nke ndị na-ege gị ntị.
N'aka nke ọzọ, mgbe egosiri ya ozi na-enweghị nkọwa - dịka ọmụmaatụ, "Ndị otu ahịa anyị ruru ihe mgbaru ọsọ niile ha nwetara na Q1," - naanị akụkụ nke ụbụrụ anyị na-arụ ọrụ bụ ndị nwere ọrụ ịghọta asụsụ. Kama enwe ọdịnaya a, anyị dị mfe nhazi ya.
Iji mkpuru okwu mee ihe n’ime akụkọ bụ ngwa ọrụ dị ike dị egwu n’ihi na ha na-etinye ụbụrụ dum. Ihe osise doro anya na-eme ka ọdịnaya gị dị ndụ-n'ụzọ nkịtị-n'uche ndị na-ege gị ntị. Oge ọzọ ịchọrọ ijide uche nke ime ụlọ, jiri ihe atụ doro anya.
Chọrọ ịbụ ihe echefu echefu? Kpọkọta echiche gị ogologo oge, ọ bụghị naanị na isiokwu.
Ì chere na ị nwere ike iburu usoro nke kaadị abụọ a kpụrụ akpụ n’okpuru n’ime minit ise n’isi? Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe Joshua Foer mere mgbe ọ meriri United States Memory Championship na 2006. Ọ nwere ike ịdị ka ọ gaghị ekwe omume, mana ọ nwere ike iburu ọtụtụ ozi n'isi obere oge oge a site na enyemaka nke oge ochie Usoro nke dị kemgbe 80 BC - usoro ị nwere ike iji mee ka ihe ngosi gị bụrụ ihe echefu echefu.
A na-akpọ usoro a “usoro nke uche,” nke a na-akpọkarị ebe nchekwa, ọ na-adaberekwa n’ike anyị bu pụta ụwa nke icheta mmekọrịta dị n’etiti mbara ala — ebe ihe dị mgbe ibe ya na-emekọ ihe. Ndi nna nna anyi na - achikota ndi mmadu choputara ebe nchekwa a di ike n’ime otutu nde mmadu iji nyere anyi aka ighari n’uwa ma choo uzo anyi.
Ọtụtụ ọmụmụ egosiwo na usoro nke loci na-eme ka ncheta dịkwuo mma-dịka ọmụmaatụ, na otu nnyocha, ndị mmadụ nkịtị nwere ike iburu naanị ọnụ ọgụgụ ole na ole na-ebu n'isi (asaa bụ nkezi) nwere ike icheta ruo 90 ọnụọgụ mgbe iji usoro ahụ. Nke ahụ bụ mmelite nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1200%.
Ya mere, gịnị ka usoro nke loci na-akụziri anyị banyere ịmepụta ihe ngosi ndị a na-echefu echefu? Ọ bụrụ na ị nwere ike iduga ndị na-ege gị ntị na njem nlegharị anya nke na-ekpughe mmekọrịta dị n’etiti echiche gị, ọ ga-adịrị ha mfe icheta ozi gị-n’ihi na ha ka mma icheta njem ahụ anya karịa ka ha na-echeta ndepụta ndị e gosipụtara ngbasa.
Gbaa data adịghị eguzo naanị - ọ na-abịa na akụkọ.
Akụkọ bụ otu ụzọ dị mkpa anyị si akụziri ụmụaka gbasara ụwa na etu esi akpa agwa. O wee pụta na akụkọ na-akpa ike mgbe ọ gbasara izigara ndị okenye ozi. Nnyocha egosila ugboro ugboro na ịkọ akụkọ bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji kwenye ndị mmadụ ime ihe.
Were, dịka ọmụmaatụ, a na-amụ nke prọfesọ na-ere ahịa na Wharton Business School duziri, nke nwalere broshuọ abụọ dị iche iche ezubere iji chụpụ onyinye na Fund Save the Children. Akwụkwọ nke mbụ kwuru akụkọ banyere Rokia, nwatakịrị nwanyị dị afọ asaa nke si Mali nke "ndụ ya ga-agbanwe" site na onyinye na NGO. Broshuọ nke abụọ depụtara eziokwu na ọnụ ọgụgụ metụtara ọnọdụ ụmụaka na agụụ na-agụgbu n'ofe Africa - dịka eziokwu ahụ bụ na "ihe karịrị nde mmadụ 11 nọ na Etiopia chọrọ enyemaka nri ozugbo."
Ndị otu si Wharton chọpụtara na broshuọ nke nwere akụkọ banyere Rokia kpalitere onyinye dị ukwuu karịa nke nwere ọnụ ọgụgụ. Nke a nwere ike iyi ihe na - emegideghị ụwa nke taa, na - eme mkpebi dabere na “obi afọ” karịa eziokwu na ọnụọgụ. Ma nchọpụta Wharton a na-ekpughe na n'ọtụtụ ọnọdụ, mmetụta uche na-eme mkpebi karịrị nnọọ nyocha nyocha. Oge ọzọ ịchọrọ ime ka ndị na-ege gị ntị kwenye ime ihe, tụlee ịkọ akụkọ nke na-eweta ozi gị na ndụ karịa igosi naanị data.
Mkparịta ụka na-ada ụda olu ma a bịa n’igwa mmadụ okwu.
Ndị ọkachamara n’ahịa maara na iwulite ọdịnaya na-eme ka ndị na-ege gị ntị nwee mmekọrịta, ma gbaa ha ume ka ha na ya mekọrịta ihe, dị irè karịa ihe a na-eri eri, mana enwere ike itinye ya na ndị ahịa ahịa: ahịa. Emeela otutu nyocha na gburugburu ime ka a kwenye na ngosipụta nke ahịa. Tù RAIN nyochara omume ahụ nke ndị ọkachamara n’ire ahịa meriri ohere karịrị narị asaa na 700 B2B, n’adịghị ka omume ndị na-ere ahịa ndị bịara n’ebe nke abụọ. Nchọpụta a mere ka ekpughe na otu n’ime akụkụ dị mkpa nke mmeri ahịa na - emeri — ya bụ, okwu na - eme ka mmadụ kwenye - na - esonyere ndị na - ege gị ntị.
Na ilele omume iri kacha bu nke kewaputara ndi mmadu na-ekwenye ekwenye na ndi na adighi emeri ndi oru a, ndi nyocha RAIN Group choputara na olile anya edeputara mmekorita, ige nti, mkpa nghota, na ijiko onwe ya dika ufodu ndi kachasi mkpa. N'ezie, imekorita na atụmanya ahụ edepụtara dị ka ọnụ ọgụgụ abụọ omume kacha mkpa mgbe ọ na-abịa n'imeri ọrịre ahịa, ozugbo ị mụsịrị atụmanya site na echiche ọhụrụ.
Raftkpụpụta ọdịdị ụda olu dị ka mkparịta ụka — na ịmepụta ụkpụrụ ga-eme ka ndị na-ege ntị nọrọ n’oche ọkwọ ụgbọala n’ikpebi ihe ha ga-atụle — bụ ngwá ọrụ bụ́ isi n’ire ahịa n’ụzọ dị irè. N'ihe sara mbara karị, na ihe ngosi ọ bụla ebe ị na-anwa ime ka ndị na-ege gị ntị kwenye ime ihe, tụlee ịmekọrịta mmekọrịta ọnụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga nke ọma.
Budata Sayensị Nke Ngosipụta Ndị Dị Irè
Tags: ihe mgbọechichenkwuputa ahiametaphorsusoro nke locikwadorooherenhazi ọnọdụ
Etu ị ga - esi wedata Mmetụta Ọchụchọ Mgbe I Na - akwaga na ngalaba Ọhụrụ